Fri, Jul 10, 2020 at 5:21pm
बलिउड स्टार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको बिहेमा सहभागी हुनेछन् यी बलिउड स्टार ...
एजेन्सी, ६ कार्तिक बलिउड स्टार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण आगामी नोभेम्बर १४ र १५ मा बिहे गर्दै छन् । उनीहरुको बिहे इटालीमा हुनेसमेत जनाइएको छ । बिहेको मिति र स्थान निश्चित भएसँगै सो बिहेमा सहभागी हुने पाहुनाबारे पनि चर्चा शुरु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सो बिहेमा रणवीर र दीपिकाका आफन्त र साथीहरु सहभागी हुनेछन् । सो बिहे कार्यक्रममा बलिउडका किंग..
एजेन्सी, ५ कार्तिक संगीतकर्मी अनु मलिकलाई सोनी टिभीले इन्डियन आइडल सिजन १० बाट निकालेको छ। मलिकलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि शोबाट निकाल्नु परेको सोनी टिभीले जानकारी दिएको छ। न्युज एजेन्सी एएनआईका अनुसार शो मा अनु मलिकको ठाउँमा विशाल ददलानी र नेहा कक्कडसँगै कुनै अर्को ठूलो गायकलाई लिने तयारी भइरहेको छ। सन् २००४ देखि रियालिटी शो मा निर्णायक रहेका उनलाई ‘मी–टु’ अभियान अन्तर्गत..
यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा मुछिए चर्चित निर्देशक सुभाष घइ, अदालतमा एफआइआर दर्ता
एजेन्सी, २९ असोज बलिउडका चर्चित निर्देशक सुभाष घइलाई एक महिलाले अदालतमा एफआइआर दर्ता गरेकी छिन् । केट शर्माले उनीविरुद्ध एफआइआर दर्ता गर्दै जर्बजस्ती चुम्बन गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छिन् । केटले सुभाषप्रति आरोप लगाउँदै भनेकी छिन् कि-‘अगष्ट ६ को दिन सुभाषले जन्मदिनको पार्टी दिने भन्दै बोलाएका थिए । उनले मलाई मसाज गरिदिन आग्रह गरे । उक्त स्थानमा पहिले नै ६ जना मानिस..
मी टु अभियान : कंगनामाथि पनि लगाए अभिनेताले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको आरोप
एजेन्सी, २८ असोज पछिल्लो समय बलिउडमा मी टु अभियानको विषयले निकै चर्चा पाएको छ। यस अभियानमा प्राय अभिनेत्रीले आफ्नो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका बारेमा सुनाउँदै आएका छन्। तर पहिलो पटक अभिनेताले पनि आफू सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको शिकार भएको बताएका छन्। एक्टर तथा होस्ट शेखर सुमनका छोरा अध्ययन सुमनले ट्वीट् मार्फत मी टुसँग जोडिएको आफ्नो दर्दनाक कहानी सुनाएका छन्। उनले एकपछि अर्को ट्वीट गर्दै भनेका छन्,..
यौन दुर्व्यवहारका विषयमा मुख खोले इमरान हाशमीले, खराब नियत भएकाहरुको मुख बन्द
एजेन्सी, २६ असोज मी टू अभियानका कारण बलिउडका धेरै कलाकारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्। यो अभिनाले खराब नियत भएकाहरुको मुख बन्द भएको छ भने फिल्ममा सेक्सी सीन खिच्दा हुने समस्याका कारण कतिपय फिल्म निर्माता भने चिन्तामा डुबेका छन्। यही विषयमा कुरा गर्दै बलिउड अभिनेता इमरान हाशमीले भने–हलिउड फिल्ममा जस्तै यहाँ पनि इन्टिमेसी म्यानेजर राख्नुपर्छ, जसको काम अभिनेत्रीले असजिलको फिल त गरेका..
सोनम कपुरलाई कंगनाको जवाफ,‘सोनम राम्री अभिनेत्री होइनन्, त्यसैले राम्रो कुरा पनि गर्न आउँदैन’
एजेन्सी, २५ असोज बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरलाई अर्का अभिनेत्री कंगना रनावतले जवाफ दिएकी छन् । अभिनेत्री कंगनाले आफ्नो जवाफमा भनेकी छन्, ‘सोनम कपुरले भन्नुको के मतलव थियो, कि #MeeToo वाला स्टोरी मेरो हो । सोनममाथि विश्वास गर्न मुस्किल छ । मैले जब आफ्नो #MeeToo वाला स्टोरी सेयर गरिरहेकी छु । यो सन्दर्भमा सोनम कपुर को हुन् मलाई जज गर्ने ? के..
छक्का पञ्जा ३ ले पायो युनिभर्सल सर्टिफिकेट, मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक शो
काठमाडौं, असोज २३ छक्का पञ्जा ३ लेकेन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सिनेमाका सबै दृश्यहरु र त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरुको आधारमा सिनेमालाई युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिएको हो । यस पटक सिनेमाले मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक शो पाएको छ । मल्टिप्लेक्समा ८५ शो पाएको छक्का पञ्जा ३ ले गत वर्षको ‘छक्का २ ‘ भन्दा ६ शो बढी पाएको हो । सर्वाधिक शो पाएकोले चलचित्र युनिटले दर्शकलाई सहज..
श्रव्य क्यासेट, सिडी, सिरआरबिटी हुँदै कलाकार अहिले एकाएक युट्युबमा केन्द्रित
बागलुङ, २१ असोज एक समय थियो चलेका गीतको क्यासेट बिक्री लाख बढी नाघ्थ्यो । गायक-सर्जकले निश्चित रोयल्टी पाउथे । कम्पनीले नाफा कमाउथे । तर अहिले जमाना फेरिएको छ । श्रव्य क्यासेट, सिडी, सिरआरबिटी हुँदै सङ्गीत व्यवसाय अहिले एकाएक युट्युबमा केन्द्रित छ । प्रविधिको फड्कोले सङ्गीत बजारकोस्वरुप बदलेको हो । श्रव्य क्यासेट त इतिहास भइसक्यो । सिडीको चलन नगन्य छ । सूचना प्रविधिको..
नेपाली दर्शकलाई 'दशैं कोसेली' : एक्लाएक्लै प्रदर्शनमा आउँदै यी ३ चलचित्र
काठमाडौं, १९ असोज नेपालीहरूको ठूला चाड पर्व क्रमशः नजिकिँदैछन् । चलचित्र क्षेत्रका लागि पनि यी चाडबाड प्रतिक्षामा हुन्छन् । तीज, दशैं अनि तिहारमा ठूला लगानीका चलचित्रको प्रदर्शनमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कारण हलमा बढी दर्शक आइपुग्ने र चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने आशा । तीज त गइसक्यो । बिस्तारै दशैंको रौनक शुरू हुँदैछ । विगतजस्तै यसवर्षको दशैं पनि चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीका लागि प्रतिक्षित..
भारतका पहिलो अन्तरिक्षयात्रीको जीवनीमा आधरित फिल्ममा शाहरुख खानले अभिनय गर्ने पक्का
एजेन्सी, १८ असोज भारतका पहिलो अन्तरिक्षयात्री राकेश शर्माको जीवनीमा आधरित फिल्ममा शाहरुख खानले खेल्ने पक्का भएको छ । फिल्म निर्माणको घोषणा निकै अगाडि भएको हो । सुरुमा यस फिल्ममा अभिनयका लागि आमिर खान, प्रियंका चोपडा, करिना कपुर, ऐश्वर्य राय, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, क्याट्रिना कैफसम्मको नाम बाहिर आएको थियो । अहिले भारतीय मिडियाका अनुसार फिल्मका निर्माताले अभिनेत्री रानी मुखर्जीलाई फिल्मका लागि साइन..
बुसान फिल्म महोत्सव कोरियाली एकीकरणमा केन्द्रित, चलचित्र “ब्यूटीफूल डेज” को प्रदर्शन आरम्भ
बुसान, दक्षिण कोरिया, १७ असोज एसियाकै सर्वाधिक ठूलो चलचित्र महोत्सवका आयोजकहरुले यसपटक उत्तर र दक्षिण कोरियाको राजनीतिक विषयलाई मात्र नउठाउन आग्रह गरेका छन् । विगतका महोत्सवमा राजनीतिक विषय, खासगरी अन्तर–कोरियाले प्रमुखता पाउँदै आएको थियो । बुसान अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा दक्षिण कोरियाली डुङ्गा दुर्घटनाको विषय समेटेर बनाइएको सिओल नामको चलचित्रले प्रमुखता पाएको थियो । दक्षिण कोरियाको यो डुङ्गा दुर्घटना सर्वाधिक हृदयविदारक मानिन्छ ।..
नाना पाटेकरलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी तनुश्रीले अमिताभ बच्चनलाई पाखण्डी भनेपछि ...
एजेन्सी, १६ असोज बलिउडका अत्यन्तै चर्चित कलाकार अमिताभ बच्चनलाई महानायक मानिन्छन् । महानायक अमिताभ बच्चनलाई तनुश्रीले पाखण्डी भनेको खबर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अभिनेत्री तनुश्री दत्तले हालै एक अन्तरवार्तामा अमिताभको कटु आलोचना गरेकी छन् । उनले कथित महानायकलाई ‘पाखण्डी’को संज्ञा दिइन् । सन्दर्भ उही नाना पाटेकरले तनुश्रीमाथि गरेको यौन दुर्व्यवहारकै हो । यो प्रकरण बाहिर आएपछि धेरै बलिउड सेलिब्रिटीहरुले..
विशेष शोमा रुचाइयो फिल्म ‘कथा काठमाडौं’, सेलिब्रेटीले गरे प्रसंसा
काठमाडौं, १५ असोज असोज १२ गते 'शुक्रबार'बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म कथा काठमाडौंलाई विशेष शोमा रुचाइएको छ। राजधानीस्थित कुमारी हलमा आइतवार साँझ गरिएको विशेष शोमा फिल्म हेरिसकेपछि सेलिब्रेटीले यसको कथावस्तु र निर्देशनसँगै कलाकारको अभिनयको प्रसंसा सेलिब्रेटीलेका छन् । फिल्म हेर्न पूर्व मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठ, निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, माधव वाग्ले, निर्देशक नविन सुब्बा, अशोक शर्मा, प्रदीप भट्टराई, दिपेन्द्र के खनाल, साम्तेन भुटिया,..
नाना पाटेकरपछि तनुश्रीले लगाइन् विवेक अग्निहोत्रीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप
एजेन्सी, १४ असोज पछिल्लो समय आफूमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटनाबारे मुख खोल्दै अभिनेत्री तनुुश्री दत्त चर्चामा छिन् । उनले निर्देशक विवेक अग्निहोत्रीले फिल्म चकलेटको एक गीत सुटिङ भइरहेका वेला कपडा उतारेर डान्स गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएकी छिन् । उक्त गीतमा तनुश्री र इरफानले अभिनय गरेका थिए । सुटिङका दौरान निर्देशक विवेकले उनलाई इरफानका अगाडि क्युज दिन भने । उनले भनिन्, ‘उक्त सिनमा..
प्राविधिक कारणले चलचित्र “ड्रीम गर्ल”को प्रदर्शन मिति सर्यो, अब मंसिर ७ मा रिलिज हुँदै !
काठमाडौँ, ११ असोज अर्जुन शर्मा, ऋषीराज आचार्य, र रामेस्वर धितालको सम्युक्त लगानीमा निर्माण भएको नेपाली कथानक चलचित्र “ड्रीम गर्ल” यहि बर्ष मंसिर ७ गते देशब्यापी रुपमा रिलिज हुने भएको छ । यसअघि असोज १९ मा रिलिज हुने भनिएको यस चलचित्रको प्राविधिक कारणले प्रदर्शन मिति सरेको बताईएको छ । चलचित्र “ड्रीम गर्ल” भारतीय फिल्म निर्माण कम्पनी रिल एण्ड रियल सिनेमासँगको सहकार्यमा आरबी मुभिको..
चलचित्र ‘अनुराग’ असोज १२ देखि देशभर प्रदर्शनमा आउने
काठमाडौँ, ११ असोज एलिजा गौतम निर्मित चलचित्र ‘अनुराग’ यही असोज १२ देखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । यहाँ बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा निर्मात्री गौतमले चलचित्रले नयाँ पुस्ताको मन जित्न सफल हुने बताईन् । “सबै चलचित्र परिवारका सबै सदस्य बसेर हेर्न मिल्दैन तर यो चलचित्र एकै ठाउँमा बसेर हेर्न मिल्ने खालको छ”, गौतमले भने । चलचित्र पूर्णरुपमा प्रेम कहानीमा आधारित रहेको बताइएको..
अजय देवगणले पत्नी काजोलको मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेपछि यस्तो भयो !
एजेन्सी, १० असोज बलिउड सेलिब्रिटीहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर नजिकका साथीभाई र आफन्तलाई मात्र सेयर गर्छन् । फ्यानहरुले उनीहरुको नम्बर पाउन निकै कठिन हुन्छ । तर, अभिनेता अजय देवगणले आफ्नी श्रीमती काजोलको मोबाइल नम्बर टि्वटरबाटै सार्वजनिक गरिदिए । उनले लेखेका थिए, ‘काजोल अहिले देशबाहिर छिन् । उनलाई ह्वाट्सएपमा ९८२०१२३३०० मा सम्पर्क गर्नुस ।’ यसरी नम्बर सार्वजनिक भएपछि काजोलका फ्यानहरु उत्साहित हुने नै भए..
बलिउडकी मोडल राखी सावन्तले आफ्नो बक्षस्थल दान गर्ने !
एजेन्सी, ९ असोज बलिउडकी मोडल राखी सावन्त विभिन्न बिषयमा दिएको बयानका कारण सधै नै विवादमा रहन्छिन् । राखी सावन्तको विवादस्पद बयानले उनलाई प्रहरी चौकीसम्म पुर्‍याउने गरेको छ । उनै, राखीले फेरि एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाइरहेकी छिन् । राखीले आफ्नो शरीरको कुनै एक अंग दान गर्ने घोषणा पनि गरेकी छिन् । उनले भिडियो सन्देशमा भनेकी छिन्-‘यो संसारमा कति धेरै असल मानिसहरु..
कैटरिना कैफ सलमान खानको प्रेममा तगारो किन बनिन् ?
एजेन्सी, ७ असोज बलिउड अभिनेता सलमान खान जहिलेपनि आफ्नो प्रेम प्रसंगलाई लिएर चर्चामा रहन्छन् । केही समय अगाडि मात्र सलमानसँग ब्रेकअप गरेकी कट्रिना सलमानको जीवनमा फेरी भित्रिएकी छन् । यसअघि सलमान लूलिया वंतूरसँग डेट गरिरहेको मिडियामा खबर आएको थियो। उनीहरु प्राय हरेक कार्यक्रम र शो मा सँगै जाने गरेका थिए। रोमानियाबाट उनी मुम्बई आउँदा सलमानको परिवार एरपोर्ट लिन जाने, घरको हरेक कार्यक्रममा..
हेर्नुहोस् बिग बोस–१२ कि सहभागी अभिनेत्री नेहा पेंडसेको बोल्ड अवतार
एजेन्सी, ४ असोज बिग बोस–१२ फेरि एक पटक चर्चासहित सुरु भएको छ। सेलिब्रेटीजदेखि कमनर्ससम्म सबै आफ्नै तरिकारले दर्शकलाई आकिर्षत गन जुटेका छन्। तर टेलिभिजन अभिनेत्री नेहा पेंडसे भने धेरै देखिएकी छैनन्। नेहाले १९९९ मा दिन्दी फिल्म ‘प्यार कोई खेल नहीँ’ बाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनी टेलिभिजनको दुनियामा प्रवेश गरिन् र सफल पनि भइन्। नेहा इन्स्टाग्राममा पनि निकै सक्रिय रहन्छिन्।..
यि सुन्दरीलाई बिग बोसले यसरी चर्चित बनायो कि रातारात गुगल ट्रेंड्समै परिन् ...
एजेन्सी, २ असोज गायिका जसलीन मथारुलाई बिग बोसमा पहिला कसैले चिन्दैन थिए। तर बिग बोसले उनलाई यसरी चर्चित बनायो की उन सामाजिक संजालदेखि गुगल ट्रेंड्ससम्म छाएकी छन्। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार जसलीन अनुप अलोटाकी शिष्या हुन्। जसलीन अनुप जलोटासँग संगीत सिक्छिन्। गुरु–शिष्याबाहेक उनीहरुबीच अर्को खास सम्बन्ध पनि छ। जुन विषयमा जसलीनले धेरै बताएकी छैनन्। तर अनुप भने यो विषयमा निकै खुलेर कुरा गर्छन्। केही..
दर्शकको मनमा राज गर्न सफल बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा काठमाडौंमा [फोटो सहित]
काठमाडौं, ३० भदौ बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा शनिबार नेपाल आएका छन्। बलिउड सुपरस्टार गोविन्दा आइतबार काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘एलजी फिल्म अवार्ड’ वितरण समारोहमा सहभागी हुन छोरीका साथ शनिबार काठमाडौं आएका हुन्। उनको नेपाल बसाई ३ दिनको हुनेछ। बलिउड सुपरस्टार गोविन्दाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि संचारकर्मीमाझ नेपाललाई साहस र प्रेमको धर्ती भन्दै आफूलाई माया गर्ने नेपालीलाई धन्यवाद दिए। नेपाल बसाइका क्रममा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने..
हलिउड चलचित्र एभिएन्जरको पाँचौं शृंखलामा बलिउड अभिनेता शाहरुख खान खेल्दै ?
मुम्बई, २९ भदौ बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई मार्वल स्टुडियोले एभिएन्जरको पाँचौं शृंखलामा बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई लिने चाहना व्यक्त गरेको छ । भारतमा मार्वल स्टुडियोका फिल्मका पात्र आइरन म्यान, डाक्टर स्ट्रेंज, थाँर, क्याप्टन अमेरिका, स्पाइडर म्यान आदि निकै लोकप्रिय छन् । भारतमा पनि आफ्नो फिल्मले राम्रो व्यापार गर्न थालेपछि मार्वल स्टुडियोको नजर बलिउड कलाकारतर्फ पर्न थालेको हो । मार्वल स्टुडियोका बीपी क्रिएटिभ डेभलपमेन्ट..
रजनीकान्तको अघिल्लो फिल्म रोबोट को सिक्वेल ! हेर्नुस् २.० को टिजर
एजेन्सी, २८ भदौ रजनीकान्त र अक्षय कुमारको प्रतिक्षित फिल्म २.० को टिजर सार्वजनिक भएको छ । यो फिल्म रजनीकान्तको अघिल्लो फिल्म रोबोट को सिक्वेल हो। यस फिल्ममा हिरो अक्षय कुमार खलनायकको भूमिकामा छन्। फिल्मको कूल लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी फिल्म रिलिज हुनुअगाडि नै उठिसकेको बताइएको छ। यो फिल्मको लागत मात्र ३ सय करोड भएको बताइएको छ। फिल्ममा एकी ज्याक्सनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका..
फिल्मी पर्दामा कम देखिंदै अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, तर वार्षिक कमाई यति ...
एजेन्सी, २६ भदौ पछिल्लो समय बलिउड अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीको फिल्म खासै आएको छैन । त्यसोत, बलिउड उद्योगमै मिथुन जस्ता सुपरस्टार आजसम्म आएका छैनन् । ‘डिस्को डान्सर’ को नामले मिथुन चिरपरिचित छन् । मिथुन आफ्नो बाल्यकाल देखि नृत्यको सौखिन थिए । यसै कारण पनि उनले गल्लीमा नृत्य प्रस्तुत गरेर पैसा कमाउने गर्थे । यसैक्रममा मिथुन कोलकाता छाडेर मुम्बई गए । मिथुनले सहायक..
तनुश्रीले लगाईन् नाना पाटेकरमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप, नानाले के भने ?
एजेन्सी, २४ भदौ बलिउड अभिनेता नाना पाटेकरलाई धेरैले सम्मान गर्छन् । तर, उनी पनि विवाद मुक्त भने छैनन् । विवाहित र छोराछोरीका बाबु भएर पनि उनले विभिन्न नायिकाहरुसँग अफेयर चलाएका थिए जसमध्ये एक नेपालकी मनिषा कोइराला समेत थिइन् । उनै नाना पाटेकरको विषयमा नायिका तनुश्री दत्ताले नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । उनले एउटा फिल्मको सुटिङका क्रममा नानाले आफूमाथि यौन दुव्र्यहार गरेको आरोप लगाइन्..
प्रेममा चुर्लुम्म ! सिद्धार्थकी गर्लफ्रेण्ड सलमानसंग भारतमा रोमान्स गर्दै
एजेन्सी, २० भादौ बलिउडमा प्रियंकाले इंगेजमेन्ट गरे लगत्तै धेरै नायक नायिकाको प्रेम र विवाह प्रसंगको चर्चा चल्न थालेको छ । बलिउड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा मोडल नोरा फतेहीको प्रेममा रहेको खुलासा भएको छ । कुनै समय आलियाको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेका सिद्धार्थ अहिले भने मोडल नोराको प्रेममा रहेर उनीसँग डेट गरिरहेको बताइएको छ । आलियाको प्रेममा रहेका उनलाई आलियाले अर्का अभिनेता रणवीर कपूरलाई..
एसईईको तयारीमा रहेकी अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरको कक्षा दशको परीक्षाफल कस्तो आयो ?
काठमाडौं, १९ भदौ पछिल्लो केही वर्षयता राजनीतिमा सक्रिय अभिनेत्री तथा निर्मात्री करिष्मा मानन्धर यो वर्ष एसईईको परीक्षा दिँदैछन् । राजनीतिमा लाग्दा पढार्इको आवश्यकता महशुस गरेकी अभिनेत्री मानन्धरले कक्षा ८ बाट अध्ययन शुरु गरेकी थिइन् । अहिले उनै अभिनेत्रीले कक्षा दशको परीक्षाको प्राप्तांक सामाजिक सञ्वाल फेसबुकमा पोस्ट गरेकी छन् । उनको सिम्बोल नम्बर ११ रहेको छ भने ८५ दिन विद्यालय लागेकोमा उनी ६२..
फल्प हुँदै गएका शाहरुख खानको करियर के 'धुम ४'ले बचाउला ?
एजेन्सी, १८ भदौ बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खान आफ्ना प्रतिस्पर्धिहरु सलमान खान, आमिर खान र अक्षयकुमारसँगको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्दै गएका छन् । उनलाई एउटा धमाकेदार फिल्मको खाँचो छ । शाहरुखका पछिल्ला केही फिल्महरुले आशातित ब्यापार गर्न सकेनन् । पछिल्लो फिल्म ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ त फ्लप नै भएको थियो । बरु उनीभन्दा कम स्टारडम भएका अक्षयकुमारले लगातार हिट फिल्म दिइरहेका छन् । शाहरुखको..
कोर्टनी कादर्सियन हट अवतारमा, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दै तस्विर
एजेन्सी, १७ भदौ अमेरिकी टेलिभिजन प्रस्तोता कोर्टनी कादर्सियनका फोटाहरू यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । तीन सन्तानकी आमा कोर्टनी फोटोमा निकै हट देखिएकी छिन् । उनले मेक्सिकोमा आफ्नो बिदा मनाउने क्रममा सुट गरेका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा छाएका हुन् । आफ्ना साथीहरू अमान्डा ली, स्टेफानी सेफर्ड, सराह होवार्ड र ह्रुस अचिम्येनसँग उनी छुट्टी मनाउन समुद्री किनारमा पुगेकी हुन् । किम कादर्सियनकी ३९..
Results 550: You are at page9of 19